Boolis Malatariya – Horseed Sports Club
Wax ka ogow kooxaha Premier League ka ciyaaro sanadkaan Xidigaha ee soo qaateen
Waxaa jira in uu furanyahay suuqa kala iibsiga Cayaartoyda iyaga oo Kooxaha ka dheela Horyaalka loogu Xiiseynta badanyahay ee Premier League ay Xiligaan soo qaateen Cayaartoy badan halka kuwo kaloo badan ay iska direen kuwaas oo uga tagay kooxahaas siyaabo kala du duwan. Hadaba dhamaan Kooxaha Premier League yey soo qaateen yaase katagay? ARSENAL IN Granit Xhaka
Koonfurgalbeed oo Boorsooyinkooda ka qaatay Gobolka Banaadir
Kulankan ayaa ahaa kulankii labaad ee ay Koonfur Galbeed tartanka ka cayaarto iyadoo guuldarro kala kulantay gobolka Banaadir Cayaarti furitaanka tartanka waxuuna kulankan u ahaa Kulankii Rajada, halka Puntland ay kulankii ugu horeeyay tartanka kasoo muuqatay. Xiddigaha Puntlanad oo weerar xooggan kusoo galay garoonka ayaa bilowga hore dhaliyay laba gool oo degdeg ah iyagoo uga
””Horseedfc.net”’hiraan&shabellaha dhaxe oo dhulka ku jiiray jubbaland
Gegada Banaadir weli waxaa si habsami la’ uga soconaya cayaaraha gobollada dalka oo caasimaddu marti gelineyso goortii u horeysay muddo 25 sanadood ah. Xulalka gobollada Hiraan & Sh/dhexe iyo Jubbaland ayaana ku kulmay kulankii galabta ka dhacay bugcadda Banaadir, iyadoo ay muuqdeen boqolaal taageerayaal ah oo labada dhan u kala sacaba tumayay, xilli ay jireen
Dimitri Payet ayaa shaaca ka qaaday 100% inuu sii joogi doono West Ham”. 29-sano jirkaan ayaa lala xiriiranaayay inuu iskaga dhaqaadi doono kooxda ka dhisan magaalada London, Kadib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah kasoo bandhigay Euro2016 xili xulkiisa dhagta ciida loo daran Final kii. Ciyaaryahaankii hore Marseille ayaa ka ciwaayiyay kooxda Hammers ka inuu
”Horseedfc.net”25 Sano ka dib Muqdisho oo Marti galineyso Tartanka Ciyaaraha Gobolada Dalka
Tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka Somaliya ayaa lagu wadaa inuu maanta ka furmo garoonka kubadda Cagta ee Banaadir stadium ee Magaalada Muqdisho. Ciyaartooyda oo ka kala timid gobollada dalka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho shalay si ay uga qeybgalaan tartanka horyaalka kubada cagta ee goballada dalka, iyadoo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya uu
‘’’Horseedfc.net’’Ciyaartii Liverpool Xalay Xasuuqday Kooxda Fleetwood oo lagu arkay Xidig u ek Jamie Vardy
Kulan Saaxiibtanimo ee wada dheeleen Kooxaha Liverpool iyo Fleetwood ayaa waxaa lagu arkay Xidig u ek Jamie Vardy u ciyaara kooxda Leicester City Waxaana lays waydiinayay in Fleetwood ay kooxdeeda ku hayso Jamie Vardy kale. Xigaan ayaa leh qaab ciyaareedka Xidigaan u ek Jamie Vardy inta badan daawadayaasha ayaa ku mashuulay xidigaan iyagoona is weydiiyay
Xasuuqii Liverpool oo Xalay Bilaawday Sanadkan lama celin karo
Liverpool ayaa sii wadata guulaheeda kulamada saaxiibtinimo waxayna kulankeedii labaad ay guul ka gaadhay kooxda Fleetwood. Reds ayaa kulankan guul ku soo gaadhay 5:0 waxaana goolasha u kala dhaliyay da’yarka Marko Grujic,Ben Woodburn halka Lucas uu muddo dheer kadib gool ka dhaliyay kulankan waxaana laba gool raacsaday Roberto firmino. Tababare Jurgen Klopp iyo kooxdiisa Liverpool
”Horseedfc.net”Juventus oo soo qadaneysa Xidiga Benzema
Juventus ayaa u dhaqaaqday saxiixa Real Madrid gooldhaliyaheeda Karim Benzema, sida lagu qoray CalcioMercato.com. Kooxda Bianconeri ayaa dooneysa in ay ku buuxiso booska uu banneeyay Alvaro Morata keddib markii laacibka dalka Spain uu ku laabtay Madrid xagaagan, wararku waxay sheegayaan in 23-jirkani uu sii joogayo Santiago Bernabeu ay culeys xoogganna ku noqon doonto Benzema. Kooxda
Weeraryahaanka cusub ee Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa soo bandhigay Sawiro isaga oo samaynaya tababar aad u adag Waxaana uu sheegay in uu diyaar Garoow ugu jiro in uu dheelo Kulamada koowaad ee istijaabinta ah ee Naadigiisa Man United. Zlatan Ibrahimovic ayaa Manchester United Waxa uu ugu soo biirey heshiiska Xorta ah Waxaana uu u Saxiixay